Stephen Mcmennamy sy ny talentany mamorona ao amin'ny 'Combophotos' | Famoronana an-tserasera
Ilay 'Combophotos' an'ity artista mpamorona antsoina hoe Stephen Mcmennamy ity
Mikarakara ity mpanakanto mpamorona ity manatevin-daharana sary roa izay miteraka fametahana ny tena maha-izy azy ary miaraka amina vazivazy mampihetsi-po lehibe izay mahavita manintona tsiky an'ireo izay mandinika azy.
Tsy vao sambany isika nahita an'io karazana asa kanto io, fa ny tena marina dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika izy ireo toy ny andiany "Combophotos" nataon'ity mpanakanto antsoina hoe Stephen Mcmennamy ity. Tale mpamorona iray monina any Atlanta izay entinay anio avy amin'ireto andalana ireto miaraka amin'ireny sary mahafinaritra ireny.
Izy tenany no niantso ity andiana saripika ity hoe 'Combophotos', ary raha fintinina, a fitambaran'ny fahalianana amin'ny fahitana ary izany dia manintona ny mason'ny mpijery mitady, na izany aza, aiza no misy ny sary miangona ireo sary roa ireo. Ny "majika" amin'ny sary tsirairay dia ny hitady fiaviany mitovy, fa inona no tsy hitovizany amin'ny habeny mba hahitana ny vokany.
Manomboka amin'izay ny fitambaran'ny kavina miaraka amin'ny poodle ka hatramin'ny inona izany vaky atody misy jiroTena mifangaro tena izy ireo ary nahasarika ny mason'izy ireo tamin'ny fotoana voalohany nijerinao azy ireo. Ny vokatr'izany dia tena mahavariana tokoa toy ny baolina golf izay apetraka eo an-tampon'ny tranobe hafahafa izay eo afovoan'ny ala na ilay ronono araraka ambonin'ny tany mba ho tonga tady.
Ny marina dia tsy mitsahatra ny talanjona amin'ny tsirairay amin'ireo sary izay entintsika amin'ireo andalana ireo ny olona betsaka amin'izy ireo aiza ny fisehoan'i Mcmennamy tsy mitsahatra ny manaitra antsika.
Manana ny asany bebe kokoa ianao nanomboka teo ny instagram y aza adino ny fotoana hanarahana azy ato amin'ity tambajotra sosialy ity satria samy mendrika hotononina ny tsirairay amin'izy ireo. John Blat, mpanakanto espaniola, dia milalao miaraka amin'ireo vokany famoronana ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ilay 'Combophotos' an'ity artista mpamorona antsoina hoe Stephen Mcmennamy ity
Tsy Ontiveros Pérez izy ireo dia hoy izy:
Izay no antony isotroako Coca-Cola foana.
Valiny tamin'i Henot Ontiveros Pérez
Fankalazana ny kanto David Bowie ny artista isan-karazany
YouTube dia hanohana horonantsary HDR hanatsara ny loko